Tonga soa��eto amin’i Wikipedia
Lahatsoratra 94 380 amin’ny teny malagasy
Nisy ny fanjakam-panjaka niorina koa teo anelanelan' ireo taonjato voalohany taor. J.K. sy ny taonjato faha-15, ka ny lehibe indrindra amin' ireo dia ny fanjakan' i Loba (Luba) sy ny fanjakan' i Londa (Lunda) ary ny fanjakan' i Kôngô (Kongo). Tamin’ ny taona 1482 dia nifandray voalohany tamin’ ny fanjaka-mpanjaka banto tao Kôngô (Kongo) ny Pôrtogey. (tohiny...)
Sabotsy, 27 Novambra 2021
Mbola tsy misy ankehitriny ny pejy mikasika ny Sabotsy 27 Novambra ao amin'ny efemerida. Ka raha tianao dia azonao ampiana na foronina ity pejy ity.